Horudhac: Dekedda vs Muqdisho City Club… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka galabta ee koobka General Daa’uud) – Gool FM
Horudhac: Dekedda vs Muqdisho City Club… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka galabta ee koobka General Daa’uud)
Haaruun October 23, 2019
(Muqdisho) 23 Okt 2019. Kooxaha murqo weynta dalka ee Dekedda iyo Muqdisho City Club ayaa galabta ku balansan garoonka Eng Yariisow Stadium ciyaar ka tirsan tartanka koobka General Daa’uud ee fasal ciyaareedkan.
Kulankan ayaa ah mid aad u xiiso badan, labada kooxood ayaana diyaar-garow xooggan u galay ciyaartan in midkood uu badiyo, waana kulankii ugu horreyay ee ciyaarayan labadan kooxood koobka General Daa’uud si lamid ah waa kulankii ugu horreyay ee Group-ka B la dheelayo.
Labadan kooxood ayaa dhoor jeer isku arkay tartammada kala duwan inkastoo ay kooxda Dekedda waxoogaa ka awood badan tahay naadiga Muqdisho City Club.
Naadiga Dekedda kulan ciyaareedkan galabta waxaa kaarka casaanka ah ugu maqnaanaya xiddigooda Cabdi-wali Aawali kaasoo uu qaatay kulankii ugu dambeyay horyaalka Somali Premier League.
Kooxda Muqdisho City Club dhammaan xiddigaheeda waa u taam waxayna diyaar u yihiin inay wajahan difaacdayaasha horyaalka ee Dekedda FC.
Kooxaha: Muqdisho City Club vs Dekedda FC
Garoonka: Eng Yariisoow (Ex Koonis)
Saacadda: 3:30 Galabnnimo xilliga geeska Afrika
Taariikhda: 23 Oktoobar 2019
Jawiga Garoonka: 30°
>- Kooxda xafidanaysa horyaalka Somali Premier League ee Dekedda ayaa u muuqanaysa mid ka itaal-roon dhiggooda Muqdisho City Club maadama 13-kii kulan ee ugu dambeysay ay ka guuleysteen 8 kulan, halka shanta kalana ay dhibcaha kala qaateen labada dhinac tartammada oo dhan.
Kulankii ugu dambeyay ay horyaalka isku arkan labadan kooxood waxaa 3-2 ku adkaatay naadiga Dekedda, ciyaartas oo ahayd middii go’aamisay in Dekedda markii 3-aad loo caleemo saaro horyaalka Somali Premier League.
Ciyaartii ugu dambeysay ay isku arkan koobka General Daa’uud labadan kooxood waxay ku kala baxeen barbaro goolal la’aan ah 0-0.
Xiddiga lagu magacaabo Feysal Xasan Xaashi ayaa galabta markii ugu horreysay ka hor imaan doona kooxdiisii hore ee Dekedda, isagoo iminka la janqaadaya kooxdiisa cusub ee Muqdisho City Club.
Hgogaamiyaha cusub ee kooxda Muqdisho City Club ninka lagu magacaabo Mohamed Mestiri ayaa galabta kulankii ugu horeyay wajihi doona kooxda ay ku dhiban tahay Muqdisho City inay ka adkaato ee Dekedda, isagoo raba inuu soo afjaro taariikh xumada ka heesata kooxdaas.
Kooxda Muqdisho City Club ayaa ah kooxda difaacaneysa tartanka xiisaha badan ee General Daa’uud, maadama sanadkii la soo dhaafay ay ka qaatay Naadiga Cawo iyo Maalin ee Horseed.
Wiilasha Dekedda FC ayaa koobkan General Daa’uud waxaa ugu dambeysay inay gacanta ku dhigaan sanadkii 2001-dii.
Kylian Mbappe oo rikoor Champions League xalay ka jabiyey Lionel Messi